Ra’isulwasaaraha Itoobiya oo Noqday isha Koowaad ee Laga Helay Warka Shilka Diyaaradda | Baligubadlemedia.com
Ra’isulwasaaraha Itoobiya oo Noqday isha Koowaad ee Laga Helay Warka Shilka Diyaaradda
Xafiiska Ra’isulwasaaraha Itoobiya Dr Abiy Axmed ayaa noqday ishii ugu horreysay ee warka ku saabsan shilka diyaaradda Itoobiya, halkaas oo lagu soo waramayo in dadkii saarnaa oo dhan ay ku dhinteen.
Ka gudub Twitter daabacaad W.Q @PMEthiopia
Dhammaadka Twitter daabacaadda qore @PMEthiopia
“Xafiiska Ra’isulwasaaraha, isaga oo ku hadlaya magaca dowladda iyo dadka Itoobya, waxa uu doonayaa in uu tacsi tiiraanyo leh u diro qoysaska dadkii ku geeriyooday Diyaaradda Ethiopia Airlines ee nooceedu yahay Boeing 737 taas oo dhacday xilli ay samaynaysay duulimaadkii caadiga ah ee Nairobi ay ku aadaysay saakay”.
Waa xog dhamaystiran oo aan caadi ahayn, taas oo kaliya aanan sheegeynin waxa dhacay, ee sidoo kale wadata faahfaahin dheeraad ah sida nooca diyaaradda, halka ay u socotay, xilliga ay dhacday, iyo in ay dad ku dhinteen.
Marka ay shilalka ceynkan oo kale ah dhacaan, waxa ay warbaahinta aad ugu dhibtoodaa helista xog dhamaystiran oo ku saabsan waxa dhacay iyo xaqiijinta dowladda uu shilka quseeyo.
Waxaa intaas sii dheer qaabka lagu soo gudbiyay xogta oo ah baraha bulshada, taas oo warbaahinta adduunka hadda u noqotay il wareed ay ka xigtaan wararka jira.
Sidaas oo ay tahay BBC-da waxa ay markasta ka foojigantahay wararka been abuurka ah ee baraha bulshada lagu faafiyo iyo ciwaanada been abuurka ah, waxaana markasta la eegaa calaamadda figta (saxda) ee saaran ciwaanka sida aad hadda ka arki kartaan kan Ra’isulwasaaraha Itoobiya.
Ra’isulwasaaraha Itoobiya Abiy Axmed ayaa madax badan oo Afrika ah uga duwan xagga daahfurnaanta iyo galaangalka saxaafadda uu siiyo.